Hafatry Ny Peroviana Ho An’ny Filoha: Tsy Azo Ifampiraharahana Ny Zonay Ao Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2013 2:28 GMT
Navoaka tao amin'ny vohikalan'ny Electronic Frontier Foundation ny lahatsoratra loharanon'ity lahatsoratra ity. I Katitza Rodriguez no Tale Iraisam-pirenen'ny Zo ao amin'ny EFF sady mandray anjara amin'ny Global Voices Advocacy. Peroviana ny tenany, ary nandany ireo herinandro vitsy lasa tao Lima niasa niaraka tamin'ireo olom-pirenena mpiara-dia aminy mba hisarika ny saina amin'ny lafy ratsin'ny TPP.
Tanatin'ny taona maro, nanao fandresen-dahatra tany anatin'ireo rantsana mpanao lalàna teo amin'ny firenena na tanatin'ireo fifanaraham-barotra maro ireo indostria mpamokatra mozika, horonantsary any Etazonia, momba ny fandaniana ireo lalàna ireo mihoa-pefy mety hamotika ny Aterineto amin'ny anaran'ny fanamafisana ny Zo Fizakà-manana. Tato ho ato, mirona mankany amin'ny fanakatonana ny kaontin'ny mpampiasa izany endrika famoretana izany, amin'ny filazana fa mandika ny fizaka-manana ary tonga hatrany amin'ny fampiasana ny fanivanana izay mety hampanjavona ny ampahany amin'ny Aterineto eran-tany. Mety hampiditra lalàna fanidiana ny dizitaly ihany koa ireo drafitra politika ireo, izay manempotra na mametra ny fahafahana mampiasa ny votoaty dizitaly azo tamin'ny ara-dalàna.
Ny Fifanarahana Fiaraha-miasa Manerana ny Pasifika / Trans-Pacific Partnership (TPP) no sehatra farany namotsiana ireo lamina fameperana ireo. Ny TPP dia fifanekena miafina izay ahitàna fehezanà fepetra momba ny fizaka-manana indostrialy mikendry ny Aterineto. Manomboka ny herinandron'ny 13 May ny andiany faha-17 amin'ireo fifanarahana mikasika io TPP io any Lima, Però. Ho resahana mandritra izany adihevitra izany ireo lamina mikasika ny fizaka-manana indostrialy – isan'izany ny fanamafisana ny fizaka-manana, ireo fanidiana ny dizitaly miendrika DMCA, ary ny andraikitr'ireo mpanelanelana amin'ny Aterineto.
Iray amin'ireo olana goavana momba ny TPP ny fahafahany mamerina manoratra ireo fepetra eran-tany mikasika ny fanamafisana ny fizaka-manana indostrialy. Tsy maintsy mampitovy ireo lalàna ao aminy sy ireo politikany amin'ireo lamina apetraky ny TPP ny firenena rehetra nanao sonia. Mety hiteraka fifampiraharahana vaovao mikasika ny fifanekena ny fiovan'ireo lalàna ireo any aoriana. Any Però, mety hanamafy kokoa ny endriky ny lalàna Peroviana momba ny fizaka-manana izay miteraka resabe izy io ary hametra ny fahafahan'ny Kôngresy Peroviana hiditra amin'ny fanovàna ny lalàna nasionaly mba hamaliana ny filàn'ireo IP izay miovaova sy ny zava-misy iainan'ireo olom-pirenena Peroviana ary ny sehatry ny teknolojian'izy ireo izay an-dàlam-pitomboana.
Izany no nahatonga ireo tambajotranà ONG Peroviana fanta-daza, isan'izany ny RedGE sy ny Hiperderecho, hanao fanentanana angatahana ny Filoha Ollanta Humala Tasso hametraka fetra maza sy tsy azo hifampiraharahana, mba hahafahana matoky fa voahaja ny zo fototry ny Peroviana ao anatin'io TPP io.
Io fanentanana io dia mangataka ny Filoha Humala:
Tsy hanaiky ireo fepetra vaovao ao anatin'ny fizarana momba ny fizaka-manana indostrialy anatin'io fifanarahana io, izay manelingelina na mampiakatra ny vidin'ny fanafody na ny fahafahantska mahazo fitsaboana ara-pahasalamana.
Tsy hanaiky ireo fepetra ao anatin'io fizaràna momba ny fizaka-manana indostrialy io izay mampidi-doza ny Aterineto, ny fahalalahantsika miteny na ny fahafahantsika mikaroka na manavao amin'ny fampiasàna ny haikanto sy ny teknolojia.
Anatin'ny fizaràna momba ny fampiasam-bola, hampidirina ireo antoka ilaina hahafahan'ny fanjakana manamafy ny fampiharana ireo lalàna nasionaly, indrindra fa momba ny raharahan'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tontolo iainana.
Miguel Morachimo, tale mpanatanteraky ny Hiperderecho, dia mampirisika ireo Peroviana hafa hanasonia io fanangonan-tsonia io:
Hangina va ianao raha misy olona miresaka ny fomba fiasanao, ny famoronanao na ny famosahanao hevitra? Ny TPP diam ety hanova ny fomba fifandraisantsika amin'ireo fitaovana ara-kolontsaina sy ny teknolojia, amin'ny maha-mpanjifa antsika. Nefa afaka mampitsahatra izany isika raha miteny. Manasa anao izahay hiray hina aminay anatin'ity fanangonan-tsonia ity, izay hitakiana ny governemanta peroviana haneho fetra mazava tsara sy tsy azo ifampiraharahana ao anatin'ity fifanarahana ity. Tsy hahavita izany izahay raha tsy miray feo aminao.
Mety hisy fiantraikany goavana sady ratsy eo amin'ny fahafahan'ireo mpampiasa aterineto mikaroka, mandray ary mizara fahalalana ny fanovàna ireo fepetra mikasika ny famerana ny andraikitr'ireo mpanelanelana amin'ny Aterineto, ary mety hanimba ny endriky ny fotodrafitrasa Aterineto amin'ny tendrony roa. Afaka hamaritra ny hoavin'ny Aterineto eran-tany ny fmba hiatrehan'ireo firenena nanao sonia ny TPP ny famahàna ireo olana ireo.
Raha Peroviana ianao ary mihevitra fa tokony hametraka fetra mazava sy tsy azo ifampiraharahana eo amin'ny TPP ny Filoham-pirenena, mandraisa anjara amin'ny fanangonan-tsonia anaty Aterineto ao Però amin'ny alalan'ny fidirana mpikambana eto http://www.nonegociable.pe/. Raha mipetraka ivelan'i Però ianao, nefa te-hanampy ilay fanentanana Peroviana, miangavy anao hampita ny hafatra any anatin'ireo bilaogy, Facebook, sy Twitter (eo ambany ireo tenifototra #yaratpp sy #notpp).
Sarin'ny fanentanana avy ao amin'ny http://www.nonegociable.pe/.